5 Fairytale Towns mba hitsidika In-Normandie | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Fairytale Towns mba hitsidika In-Normandie
Ny faritra Normandie Faritany amin'ny faritra avaratrandrefan'i Frantsa ary dia somary fohy diany niala Paris. Izy io dia malaza Travel toerana ho an'ny maro amin'ireo izay te-hiaina ny maha-Avaratra Frantsa. -Normandie, izany rehetra izany dia manana, avy amin'ny manan-karena tantara fa ny daty aoriana taonjato maro, ho miavaka sy tsara tarehy ny endriky ny nahandro izay te handao anao intsony. Na izany aza, iray amin'ireo tena manintona ny Normandie no mampino maritrano. Ny faritra no mahavariana an-trano ny tanàna Fairytale fa tena hisambotra ny ditry. The voajanahary tsara tarehy fa blends amin'ireo tanàna be atao mamela maro matahora. Noho ny tsy mampino lazan'ny ireo sary tonga lafatra tianao, Save A Train efa nanisy miaraka ny lisitry ny 5 Fairytale tanàna mba hitsidika any Normandie. Miezaha anjara azy ireo amin'ny ny dianareo amin'ny manaraka ianao mandeha amin'ny alalan'ny Frantsa.
1. Fairytale Towns mba hitsidika In-Normandie: Honfleur, Calvados
Honfleur mety ho ny tanàna malaza indrindra ao amin'ny lisitra ity. Mpizahatany maro no mitsidika ity tanàna seranan-tsambo mahafinaritra ity ary mankafy ny zavatra rehetra atolotray. Tsy manam-paharoa sy azo fantarina noho ny lava, ferana, ary maro loko trano. Efa nanompo ho toy ny aingam-panahy ny maro mpanakanto nandritra ny taona maro, ary ny manam-paharoa sy maro loko trano efa babo amin'ny sary hoso-doko maro. A mandeha eny an-dalamben'i Honfleur dia handao anao hahatsapa ho toy ny ianao niditra tao amin'ny sangan'asa. It will undoubtedly enchant you.
Ny tanàna dia manana be dia be ny mpizaha tany avy amin'ny alalan'ny izany sy manome ny zava-drehetra avy amin'ny matsiro hazan-dranomasina, ny mampientam-po tranombakoka. Raha toa ve ianao mitsidika tanàna mahafinaritra ity, handray eo amin'ny toerana tsara tarehy sy ny tantara. tena zava-dehibe, ho azo antoka ho tia ny seranan-tsambo ao an-tanàna, izay fantatra amin'ny hoe ny Vieux Bassin. Izany no eo amin'ny toerana fizahan-tany malaza indrindra any Normandie. Ny seranana tao an-trano indray mandeha sambo ny ankamaroan'ny nanjono sy ny varotra fanaka. Na izany aza, Nandritra ny taona maro dia lasa an-trano ny maro yachts.
Rouen ny Brest Lamasinina
Rouen ny Le Havre Lamasinina
2. Les Andelys, ny
Les Andelys dia ny zavatra rehetra ilainao ao amin'ny quintessential tanàna frantsay. Ny tanàna mahafatifaty marina akaikin'ny Reniranon'i Seine. Ankoatra ny akaiky ny renirano tsara tarehy, Les Andelys maitso tsara tarehy koa havoana sy ny vato fotsy hantsam-bato manodidina azy. Les Andelys no sary tonga lafatra, dia ny antony maro mpitsidika hanaikitra jatony sary ity tanàna mahafinaritra sy ny tontolo manodidina.
Ankoatra ny ny hatsaran-tarehiny, Les Andelys ihany koa malaza noho ny tamin'ny taonjato faha-12 lapa. anati-rova Paoly, Chateau Gaillard, tao an-trano indray mandeha ho Richard ny Lionheart. Raha ny trano mimanda mety ho rava izao, ny mahavariana habeny ka hanao izay mbola manaitra mpitsidika izay miakatra ny vato Bluff mba hahita izany.
Paris ho any Le Mance Lamasinina
Paris ho Brest Lamasinina
Le Havre ny Le Mans Lamasinina
Paris ho any Nantes Lamasinina
3. Fairytale Towns mba hitsidika In-Normandie: Giverny, ny
Giverny no tena fantatra Claude Monets an-trano. Claud Monet nanofa ny fananana ao amin'ny 1880s sy ny fianakaviany. Nandritra ny taona maro ny harena niova ho tsara kokoa, ka dia tonga manankarena kokoa. taty aoriana, izy dia afaka nividy ny fananana, ary koa ny sasany amin'ireo tany manodidina. Monet nanao ny Studio teo ary namorona be dia be ny asa tamin'izany fananana, ary nasian'ireo Giverny on the map. Ankoatra ny Giverny trano ny tia ny Monet, izany koa ny an-trano ny hafa impressionist mpanakanto. Anisan'izany Claude Cambur, Christophe Demarez, ary Ramier. Ny manan-karena tantara mitaona ao be dia be ny zavakanto tia izay te hiaina ny fiainana sy asa mahatalanjona ireo mpanakanto.
Ankoatra ny tanàna kanto miavaka tantara, ny tanàna ihany koa ny tsara tarehy malaza amin'ny toerana manodidina. Izany no iray amin'ireo antony lehibe mpanakanto tia azy. Io ihany hatsarany manovo amin'ny maro mpitsidika amin'izao fotoana izao. Ny firenena mahafatifaty zohy fialofan'ny, zaridaina tsara tarehy, ary mavitrika Ambiance voajanahary dia tsy maintsy mahita. Make sure to stop by Giverny if you are ever in the Eure region of Normandy.
Paris ho any Le Havre Lamasinina
Le Mans any Paris Lamasinina
Io tanàna kely mahagaga no misy ao amin'ny faritra dAuge Pays. Ny faritra dia malaza noho ny liqueur sy ny fromazy. Ankoatra ny ny mahafinaritra ny faritra tiany tolotra, dia afaka mahatsapa tsara tarehy ihany koa ny ara-tantara tanàna. Ny iray amin'ireo tanàna malaza indrindra ao amin'ny faritra dia Beuvron de Auge. Tsy manan-tantara feno fonenana izay daty miverina any amin'ny 1500s. Trano toy ny Vieux Manor avy any amin'ny taonjato faha-16, mitambatra ny antsasaky timbered trano avy any amin'ny taonjato faha-17, hahatonga anao hahatsapa toy ny efa nandeha niverina ara-potoana. Mandeha midina ny cobbled arabe ny Beuvron de Auge no fomba tonga lafatra mandany ny tolakandro.
Brest ny Le Mans Lamasinina
Nantes ho Brest Lamasinina
Le Mans ho Rennes Lamasinina
Le Mans any Rouen Lamasinina
5. Fairytale Towns mba hitsidika In-Normandie: Barfleur, ny sasany
Ao amin'ny faritra avaratra-Normandie, Cotentin Saikinosy lainga tsara tarehy amoron-tsiraka ny tanàna Barfleur. Fanjonoana mangina io tanàna ihany ny 700 mponina no tena fantatra amin'ny manaitra tsara tarehy. Tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ho iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Frantsa. Izany no nalaza ny lohateny ny Plus beaux Village de France, and it is clear to see why.
Barfleur dia toy ny vatosoa tsy misy hafa. Ankoatra ny manodidina tsara tarehy sy ny ranomasina midadasika fijery, an-trano ihany koa ny maritrano manan-tantara. Voalohany, eny an-dalambe, ary ny tenany aza cobbled tena antitra. Faharoa, trano antitra maro daty miverina any amin'ny taonjato faha-16. Ny trano tranainy indrindra tao an-tanàna be miverina lavidavitra kokoa noho izany. Ao amin'ny Sainte Catherine kianja, ianao dia afaka mahita ny trano izay daty Niverina an-Moyen Âge. Tsy manana fidirana, ivelany tohatra, ary ny varavarankely mullioned. Na dia kely Barfleur tanàna, dia mendrika ny fitsidihana if you are in the area.
Brest ho Rennes Lamasinina
Brest ho Nantes Lamasinina
Lille ny Le Havre Lamasinina
Tours ho Le Havre Lamasinina
Normandie no tena lehibe, ary na dia eo aza izany ho an-trano ny maro Fairytale tanàna, tsirairay amin'izy ireo dia tsy manam-paharoa. Tsirairay dia manana ny foto-pisiana sy ny toetrany fa matahora ravina mpitsidika. Raha te-hiaina ny zava-mahagaga ireo tanàna, ary koa ny zavatra hafa rehetra dia manana ny tolotra Normandie, Boky A Train Ticket ary manomboka ny dia.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Fairytale Towns mba hitsidika In-Normandie” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-towns-visit-normandy%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Fairytaletowns frenchtowns Normandie Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra travelfrance traveltips
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe